Tapaka ny herinaratra amin'ireto toerana manaraka ireto noho ny fianjeran'ny "pylône" lehibe iray eny Behintsy ka niantraika amin'ny fitaovam-pitaterana herinaratra amin'ny faritra maro: Ilafy - Ambatobe - Nanisana - Ankadinframamy- Mahazo - Ambatomaro - Antsobolo - Ambohitrarahaba - Andranobevava - Amboditsiry - Ambodivona - Ambatomainty - Manjakaray - Anjanahary.
Sary Gasypatriote Morondava sy Sary nindramina
Nanao hetsika teo amin’ny biraon’i Mamy Claver, omaly hariva, ireo mpanohana mitaky ny hamoahana azy. Kandida Ben’ny tanàna tsy miankina teto amin’ny Kaominina ambonivohitr’i Morondava tamin’ny fifidianana natao ny 27 novambra 2019 i Mamy Claver. Mitarika vonjimaika amin’ny isam-bato raha ny vokatra navoakan’ny CENI. Eo ampiandrasana ny vokatra ofisialy havoakan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana, Toliara, no nitontona ny fiantsoana azy hiseho eo anatrehan’ny fitsarana ny 2 janoary 2020 noho ny fitorian’ny kandida mpifaninana aminy. Efa nanodidina ny misasakalin’io 2 janoary io no nivoaka ny didy, mitazona azy am-ponja. Mitaky ny hamoahana azy ireo mpomba azy. (Jereo Sary Tohiny)
Nifarimbona nametraka saina mena, izay mamaritra ny faritra mety hianjeran'ny vato eny Ambanin'Ampamarinana mba ahafantaran'ireo mponina eny an-toerana ny loza izay mitatao azy. Niara-nanatanteraka izany, omaly, ny teo anivon' ny BNGRC, ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, ny Corps de Protection Civile, ny Sapeur Pompier ary ny Polisy Monisipaly. (Jereo Sary Tohiny)
Misedra olana vokatry ny fiandronan’ny rano ireo tanàna miorina amin’ny faritra iva toerana eto an-drenivohitra taorian’ny rotsak’orana nisesy hatramin’ny 31 desambra 2019 no mankaty. Mitaintaina amin’ny mety ho fihotsahan’ny tany sy vato ihany koa ireo mponina amin’ny faritra avo. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 02 janvier 2020 22:16
Tsimialonjafy Mahamasina: Nisy fiotsahan’ny vatobe indray androany
Tokony ho tamin’ny iray ora marainan’ity Alakamisy 02 janoary 2020 ity dia nisy fiotsahan’ny vatobe indray teny Tsimialonjafy Mahamasina, Boriborintany faha-4 Antananarivo Renivohitra. Tsy nisy ny aina nafoy fa trano hazo iray tsy nisy nipetraka no potika. Nisy ireo olona sasany voatery nifindra toerana. Nidina teny an-toerana ny BNGRC miaraka amin’ny sefo Fokontany nijery ny toe-java-misy, sy ireo vato mbola ahiana hiotsaka, namaritra ireo toerana mampidi-doza, ary indrindra nanentana ireo mponina eo amin’ny manodidina mba hifindra toerana.
jeudi, 02 janvier 2020 12:34
Sambava: Sesilany ny lozam-pifamoivoizina ny 01 Janoary 2020
Sambava: Sesilany ny lozam-pifamoivoizina ny 01 Janoary 2020 (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 02 janvier 2020 12:18
Toamasina: Miaramila iray vaky loha niady tany amin’ny Bar
Nangingina tsy toy ny mahazatra ny fety fitsenana ny taona vaovao 2020 teto Toamasina. Vokatry ny alikaola sy hamamoana anefa dia miaramila iray no vaky loha niady tany amin’ny Bar tao Mangarivotra ny alarobia vao maraina. Tovovavy iray no namono tena, saingy avotra ihany ny ainy. Nisy lehilahy iray maty voatsatoka antsy noho ny ady tany anaty Bar tao Ankirihiry. Nisy 11 ireo olona vaky loka niady an-dalana tao anatin'ny fety.
jeudi, 02 janvier 2020 12:17
Zandary nitifitra olona teny Ivato: Nosamborina ka nogiazana ny basy teny aminy
Nosamborina ilay zandary nahavanon-doza izay nitifitra ka nahafaty lehilahy iray tao anaty toeram-pisotroana tetsy Ivato, ny marainan’ny taom-baovao 1 janoary 2020 ity. Nanao fanamiana sivily ilay zandary, ary nitondra basy tany am-balahany. Io no notifiriny an’ilay tovolahy teo amin’ny lohany ka nahafaty azy avy hatrany. Vao nahazo fampandrenesana an’ity loza ity ny teo anivon'ny Zandarimariam-pirenena dia namoaka didy sy fahazoan-dalana fanenjehana. Andron'io ihany dia voasambotra ilay zandary nahavanon-doza ka nogiazana ny basy teny aminy. Natomboka avy hatrany ny famotorana ifotony sy arak'asa momba azy ka atolotra ny Fitsaràna aorian’izay. Nanantitratitra ny Zandarimariam-pirenena fa « ao anatin'ny fotoam-panadiovana anatiny ankehitriny » ka "tsy mitahiry olon-dratsy".
Noho ny raharaha kolikoly sy tsy fandoavan-ketra, dia notazonin'ny fitsarana japoney am-ponja ity Filoha Tale Jeneralin'ny Ranault-Nissan ity, nahazo fanalefahana izy taty aoriana, ka nahazo nivezivezy, fa naraha-maso fotsiny tamin'ny trano fonenana nasiana azy (résidence surveillée), nahazo nivezivezy izy, fa tsy maintsy mipoitra isaky ny telo andro. Fa akory ny hagagan'ny mpitondra japoney, fa efa any Liban izy ny talata teo no nanao fanambarana fa tsy nandositra izy, fa afaka tamin'ny fanagejana sy ny fitazonana tsy an-drariny.
Page 11 sur 506